Ngokuvamile, ubulili obuhle kufanele buhambele igumbi lokuxilongwa kwe-ultrasound. Ukutadisha okunjalo kukuvumela ukuba uthole amathambo okutholakala ngesikhathi bese uqala ukwelashwa okufanele. Uma uzibuza ngesikhathi se-ultrasound ye-pelvic, lapho kufanele ukwenze (ngaluphi usuku), lesi sihloko sizokutshela.
I-ultrasound ye-pelvis encane uma kunesidingo? Ukuxhashazwa kuvame ukuqokwa ngumjozi wezifo zamasosha. Imfuneko yokucwaninga ingaba yizimo ezilandelayo:
Umjikelezo wokuya esikhathini noma ukuphuma kwegazi eside;
Ubuhlungu besisu esingaphansi;
Ukukhipha ngephunga elimnandi;
I-Neoplasms emgodleni wesifuba esincane;
Ukukhulelwa noma ukusola kwalo;
Umphumela wokuhlola ompofu ompofu;
Ukwanda kwezitho (ama-ovari nesibindi), etholakala ngesikhathi sokulunywa;
Izinqubo zokuvuvukala ze-pelvis encane nokunye.
Uma kungcono ukwenza i-ultrasound ye-pelvis encane (ngaphambi noma ngemva kwenyanga), umjozi wezinzwa uzokutshela. Kuncike kakhulu esimweni ngokwaso (izimpawu, isimo sesiguli, ubudala bakhe, njalonjalo). Ake sicabangele ukuhlukahluka kokwenza ukuxhaphazwa kwezifo.
Uma utshelwe ukusebenzisa i-ultrasound encane ye-pelvic, nini ukucwaninga? Ngokwehluleka okujwayelekile, kunconywa ukuba unikeze inqubo engxenyeni yokuqala yomjikelezo. Izazi ze-gynecologists zeluleka ukuba ziye kuchwepheshe emva kokuphela kokuphuma kwegazi. Ngaphambilini, ukuqhuba i-ultrasound kumane kungenzi umqondo. Ngesikhathi sokuya esikhathini, isibeletho sigcwele igazi. Ukuxilonga akukwazi ukunikeza ulwazi oluthembekile.
Akunconywa ukuthi uqhube isifundo sangaphambi kwenyanga. Iqiniso liwukuthi esigabeni sesibili se-progesterone yokujikeleza isabelwe ngokugcwele. Le hormone ikhuthaza ukuqina kwe-endometrium. Uma ngalesi sikhathi uvakashela ikamelo le-ultrasound, lochwepheshe ngeke nje abone ukukhubazeka okuncane embranini yomsindo wesitho socansi. Lezi zingaba ama-polyps noma ama-fibroids.
Ingxenye yokuqala yomjikelezo yisikhathi esihle kakhulu se-ultrasound ye-pelvic. Nini ukwenza inqubo? Ngomjikelezo ojwayelekile, lena yilosuku lwesi-5-7. Uma ukuhamba esikhathini esifushane, futhi umjikelezo ufushane, kuzoba izinsuku ezingu-3-5. Ngenkathi yesikhathi eside yowesifazane kungenzeka ukufeza ukuxilongwa kusukela ngosuku lwesihlanu kuya kweyishumi.
Uma uhlela ukukhulelwa, uzobona i-ultrasound ye-pelvic. Nini ukwenza okungcono ukulandelela i-ovulation? Kulesi simo, odokotela ngokuvamile batusa isifundo somphakathi. Kodwa okuningi kuxhomeke eziciweni ngabanye besifazane. Uma ubude obujwayelekile besigaba sesibili luyizinsuku ezingu-10-14, khona-ke ngokubala okulula ungabeka usuku oluthile lokuvuthwa. Ukuxilonga kuqala ukuqala izinsuku ezimbalwa ngaphambili.
I-folliculometry iqala ngemva kokuya esikhathini, futhi iphela ngaphambi kwesinye ukuphuma kwegazi. Isigaba sokugcina senqubo sihilela ukutholakala komzimba ophuzi nokuqinisekiswa kokuvuthwa okwenzekile. Lokhu kungenziwa kakade engxenyeni yesibili yomjikelezo.
Uma unokusola kokukhulelwa, ukuthola idatha ethembekile udinga ukuba ne-ultrasound ye-pelvic. Nini okufanele uyenze kulokhu? Lokhu kuhlolisisa kuhilela ukutholakala kweqanda lesibusiso emgodini we-uterine. Bheka isethi yamaseli umshini we-ultrasound ungapheli amasonto amabili kuphela ngosuku oluthiwa lwenyanga. Amanye amadivaysi anezindlela zanamuhla ezengeziwe. Bathola ukukhulelwa ezinsukwini ezimbalwa emva kokulibala.
Iqiniso lokukhulelwa litholakala njalo esigabeni sesibili somjikelezo. Ukuxilongwa kunqunywe ukungabi khona kwezinsuku izinsuku ezingaphezu kwezinhlanu.
Ngemuva kokukhipha isisu noma ukubeletha
Kungcono nini ukwenza i-ultrasound ye-pelvis encane - emva komjikelezo wokuya esikhathini noma ngaphambili? Uma kungumbuzo wokukhipha isisu okuphelele, khona-ke ukuxilongwa kufanele kwenziwe ngezinsuku ezingu-5-7 emva kokukhipha. Lezi zinsuku, abesifazane bayaphala, okuyinto odokotela abangabhekiseli esikhathini sokuya esikhathini. Ukubuyiselwa komjikelezo ofanayo kuzokwenzeka kancane kancane ezinyangeni eziningana. Ukuxilongwa kwe-Ultrasound ngemuva kokukhipha isisu kuhilela ukuhlola umgogodla wesibindi sezinsalela zeqanda lesisu. Uma zitholakala, owesifazane udinga ukuphathwa okungeziwe kwezokwelapha.
Emva kokuzalwa kwengane, bonke abesifazane kufanele bahlole ukuhlolwa kwe-ultrasound. Kuvame ukuqhutshwa ngisho nasesibhedlela sokubeletha ngosuku lwesishiyagalolunye emva kokubeletha. Kulesi simo, umjikelezo wokuya esikhathini uzosinda ngokushesha (uma kuncelisa ingane). Kuvela ukuthi emva kokuzalwa kwe-ultrasound kufanele kwenziwe ngaphambi kokuya esikhathini (ngesikhathi sokwabiwa kwe-lochia).
Abesifazane emva kweminyaka engama-40 banqunywa ama-ultrasound avamile we-pelvis encane. Kungcono nini ukukwenza? Kule minyaka yobudala, iningi lalaba besifazane linomsebenzi wokumisa esikhathini, okushiywa yi-menopause yokugcina. Kulezi zikhathi, iziguli zinegazi elingavamile. Abesifazane ngokwabo bayabiza enye indlela yokuya esikhathini. Kumele uqaphele ukuthi isikhathi esisuka kwesinye kuya kwesinye ukuphuma kwegazi singase sibe nezinyanga ezimbalwa. Ngakho-ke, kulokhu, i-ultrasound yenziwa ngaphambi kokuqala kokuya esikhathini (ngaphandle kokulinda).
Ufunde ngesikhathi lapho kungcono ukwenza ukuhlolwa kwe-ultrasound kwezitho zomzimba. Ngezindlela eziningi, izinsuku zokujikeleza ezikhethiwe zixhomeke kwizizathu zokuthola ukuxilongwa. Uma isifundo sihilela ukuhlola isigxobo segciwane lesisu, ngakho-ke kunconywa ukuba ukhethe izinsuku zokuqala zomjikelezo (emva kwesikhathi sokuya esikhathini). Uma injongo yokuxilongwa yi-ovaries, inzuzo inikezwa phakathi komjikelezo wokuya esikhathini.
Uma ungabaza ukuthi uzokwenza nini i-ultrasound ye-pelvic, xhumana nodokotela wakho wezifo. Lungisa ukwazisa udokotela mayelana nomjikelezo wakho wokuya esikhathini (isikhathi sakho, ukuqina kwegazi nokujwayelekile). Ngemuva kwalokho, ochwepheshe bazobeka izinsuku ezifanele kuwe. Konke okusemandleni akho, ungaguli!
Universal isithwebuli zokuxilonga izimoto. Ukuhlola imoto ngezandla isithwebuli zokuxilonga izimoto
Izisetshenziswa ezilethwayo ka tandziso kanye ukupela kwabo